साहसी नेतृत्व — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
यहाँ प्रदर्शनमा MLK गरेको साहसी नेतृत्वको छ (म कहिल्यै पढ्नुभयो सबै भन्दा राम्रो लेखन केही उल्लेख छैन). उहाँले अन्यायपूर्ण व्यवस्था अँगालेको गर्न इन्कार र धैर्य प्रतीक्षा गर्न इन्कार. उहाँले मानिसहरूको सम्पूर्ण जाति को तर्फबाट पहल लिन्छ. कालो मानिसको रूपमा, म उसलाई मार्फत पूरा काम को लागि परमेश्वरको आभारी छु. र मसीहीको रूपमा, उहाँले जस्तै म जस्तै कठिन न्याय लागि लड्न चाहनुहुन्छ, येशूले मात्र सिद्ध न्याय ल्याउन सक्छ भन्ने मनमा पालन गरेमा. र उहाँले हुनेछ.
यो MLK गरेको प्रसिद्ध पत्र एक अंश हो. तपाईं एक मौका प्राप्त जब तपाईं सारा कुरा पढ्नुपर्छ.
"भन्दा बढी हामी पर्खेर छन् 340 हाम्रो संवैधानिक र परमेश्वरको दिइएको अधिकार लागि वर्ष. एशिया र अफ्रिकाको राष्ट्रहरूले राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त तिर jetlike गति बढ्दै हुनुहुन्छ, तर हामी अझै पनि एक भोजन काउन्टरमा एक कप कफी प्राप्त तिर घोडा अनि बग्गीमा गति छिर्न. सायद यो भन्न अलगाव को टीस डार्ट्स महसुस कहिल्यै भएकाहरूलाई लागि सजिलो छ, "प्रतीक्षा गर्नुहोस्।" तर तपाईंले आफ्नो इच्छामा भीषण मोब्स लिंच आमा र पुर्खाहरूले देखेको छ जब र विधिपूर्वक आफ्नो बहिनीहरूले र भाइहरू डुबा; तपाईंले देख्नुभएको छ घृणाले भरिएको प्रहरी सराप्न, बर्खास्त र पनि आफ्नो कालो भाइबहिनीहरू मार्न; तपाईं आफ्नो बीस लाख निग्रो भाइहरूको विशाल बहुमत एक समृद्ध समाज को बीचमा गरिबी को एक airtight पिंजरे मा smothering हेर्न गर्दा; तपाईं अकस्मात् आफ्नो जिब्रो मुड र तपाईं त्यो अझै टेलिभिजनमा विज्ञापन गरिएको छ कि सार्वजनिक मनोरञ्जन पार्क गर्न जान सक्नुहुन्छ किन आफ्नो छ वर्ष पुरानो छोरी गर्न व्याख्या गर्न खोज्नु रूपमा आफ्नो बोली तुतलाना गर्दा, र त्यो Funtown रंग छोराछोरीलाई लागि बन्द गरिएको छ बताए गर्दा आँसु उनको आँखा मा Welling हेर्न, र inferiority को अशुभ बादल उनको सानो मानसिक आकाश मा गठन गर्ने शुरुवात हेर्न, र हेर्न उनको सेतो मान्छे तिर एक अचेत तीता विकास उनको व्यक्तित्व विकृत गर्न सुरु; तपाईं सोधेको छ जो एक पाँच वर्षको छोरा लागि जवाफ concoct छ जब: "पिताजी, किन सेतो मान्छे रङ्गिन मान्छे त अर्थ व्यवहार गर्छन्?"; तपाईं पार काउन्टी ड्राइभ लिन र पाउन जब यो रात रात पछि कुनै मोटेल तपाईं स्वीकार गर्नेछ किनभने तपाईंको ओटोमोबाइल को असहज कुनामा मा सुत्न आवश्यक; तपाईं पढेर nagging संकेत गरेर दिन र दिन बाहिर अपमान गर्दा "सेतो" र "रंग"; आफ्नो नाम "nigger हुँदा,केटा "आफ्नो बीचको नाम हुन्छ" " (तर पुरानो तपाईं) र आफ्नो थर यूहन्ना हुन्छ ",श्रीमती "र आफ्नो पत्नी र आमा सम्मान शीर्षक कहिल्यै दिइएको" "; तथ्यलाई द्वारा राती दिन तपाईं harried र तर्साउने गर्दा तपाईं एक निग्रो छन् कि, tiptoe रुख मा लगातार जीवित, कहिल्यै एकदम के अर्को आशा गर्न थाह, र भित्री डर र बाहिरी resentments पिरोल्दा छन्; तपाईं सधैंभरि "nobodiness" को एक degenerating अर्थमा झगडा हुँदा हामी गाह्रो प्रतीक्षा पाउन किन -then बुझ्न. एक समय आउँछ धैर्यको कप रन हुँदा, र मानिसहरू अब निराशाको पातालमा होमियो गर्न इच्छुक छन्. म आशा गर्छु, Sirs, तपाईं हाम्रो वैध र हटाउन नसकिने अधैर्य बुझ्न सक्नुहुन्छ. तपाईं व्यवस्था तोड्न गर्ने इच्छुकता भन्दा फिक्री को एक महान सम्झौता व्यक्त. यो पक्कै पनि एक वैध चासो छ. हामी त लगनशील भई सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय पालना गर्न मानिसहरूलाई आग्रह देखि 1954 सार्वजनिक विद्यालयमा अलगाव outlawing, हामीलाई इन्द्रियहरुमा नियमहरू तोड्न लागि पहिलो नजर मा यो बरु असत्यवत लाग्न सक्छ. एक राम्रो सोध्न सक्छ: "तपाईं कसरी केही नियमहरू अरूलाई भंग र पालन समर्थन गर्न सक्छन्?"जवाफ तथ्यलाई मा निहित त्यहाँ नियमहरू दुई प्रकारका छन् कि: बस र अन्यायपूर्ण. म नियमहरू पालन समर्थन गर्न पहिलो हुनेछ. एक मात्र कानुनी तर बस नियमहरू पालन गर्न एक नैतिक जिम्मेवारी छ. Conversely, एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था भङ्ग गर्न एक नैतिक जिम्मेवारी छ. म सेन्ट सहमत थियो. अगस्टिनको एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था सबै कुनै व्यवस्था छैन "भनेर."
-Martin लुथर राजा जूनियर, एक बर्मिंघम जेल पत्र
BornWithPurpose • अगस्ट 19, 2013 मा 8:33 छु • जवाफ
-मार्टिन लुथर राजा जुनियर.
शन • अगस्ट 19, 2013 मा 8:33 छु • जवाफ